I-Costanera Apart Vista Lago 2pers 1 umbhede womshado - I-Airbnb
I-Costanera Apart Vista Lago 2pers 1 umbhede womshado
Chile Chico, XI Región, i-Chile
Igumbi e-ifulethi elisevisiwe ibungazwe ngu-Francisco
Ifulethi elisha, indawo emaphakathi kanye nenhlanhla ethekwini, phambi kweChibi likaGeneral Carrera. Indawo enazo zonke izinsiza, ibhange, ikhemisi, izindawo zokudlela, nezitolo ezinkulu kanye nesiteshi sesevisi. Ukufinyelela ngemoto noma ngebhasi. Ixhunywe kahle yiCarretera Austral, imizila yase-Argentina nangesikebhe. Indawo enhle enakho konke ukunethezeka nezinsiza, ukujabulela izikhathi zokuphumula nokuqinisekisa isipiliyoni esiyingqayizivele njengokubuka ukushona kwelanga kanye / noma ukuphuma kwelanga ubheke echibini.
Amafulethi amasha anamafasitela amakhulu we-thermopanel akwenza kukhanye kakhulu ukujabulela umbono oyingqayizivele weGeneral Carrera Lake. Igumbi lokulala elihlome ngokuphelele, elithokomele kakhulu endaweni ethule ngaphandle komsindo ophazamisayo. Ukuxhumeka kwe-WIFI esakhiweni sonke, ukushisisa okuphakathi, i-TV yesathelayithi yesikrini esiyisicaba, ikhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokugezela elinezinsiza, amathawula amhlophe amasha, amashidi amhlophe wentambo angama-400.
Sethula iCostanera Apart.
Isikhathi sesifikile sokuthi sibheke izindawo zethu zokuhlala ezinekhwalithi eqinisekisiwe nokunethezeka:
Ifulethi elisha, indawo emaphakathi kanye nenhlanhla ethekwini, phambi kweChibi likaGeneral Carrera. Indawo enazo zonke izinsiza, ibhange, ikhemisi, izindawo zokudlela, nezitolo ezinkulu kanye nesiteshi sesevisi. Ukufinyelela ngemoto noma ngebhasi. Ixhunywe kahle yiCarretera Austral, imizila yase-Argentina nangesikebhe. Indawo enhle enakho konke ukunethezeka nezinsiza, ukujabulela izikhathi zokuphumula nokuqinisekisa…
4.70 (izibuyekezo ezingu-40)
I-Chile Chico iyidolobha elihle e-Chilean Patagonia eyaziwa nangokuthi "iDolobha Lelanga" ngenxa yesimo sayo sezulu esipholile esikhethekile, esifudumele futhi sinelanga kunesifunda sonke.
Indawo enezindawo ezinhle ezinikezela ngazo zonke izinhlobo zemisebenzi ukuze uzizwe futhi uzwe iPatagonia.
Umlingo wokuhlala nathi uwukujabulela ubumfihlo obuphelele kodwa ngaso sonke isikhathi siphelezelwa futhi sisizwa ithimba lethu labasebenzi, hhayi nje ukunakekela izinsiza kodwa ukunikeza zonke izinhlobo zeseluleko namathiphu okukhetha izinketho ezingcono kakhulu zokuvakasha nemisebenzi ehlukahlukene. okunikezwayo njengokuhamba ngezinyawo okuqondisiwe, ukuhamba ngezinyawo, imisebenzi yechibi, ukudoba, ukuvakasha kwasemaphandleni, ukugibela phakathi kokunye.
Umlingo wokuhlala nathi uwukujabulela ubumfihlo obuphelele kodwa ngaso sonke isikhathi siphelezelwa futhi sisizwa ithimba lethu labasebenzi, hhayi nje ukunakekela izinsiza kodwa uk…
Hlola ezinye izinketho ezise- Chile Chico namaphethelo